ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » ဒီလိုမြင်ကွင်း » ကာကွယ်ဆေးအပြည့်ထိုးထားသော Norwegian Cruise Line သင်္ဘောပေါ်တွင် အဓိက COVID-19 ဖြစ်ပွားမှု
Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • စီးပွားရေးခရီးသွား • ဒီလိုမြင်ကွင်း • ကနျြးမာရေးသတင်းများ • ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ • ဇိမ်ခံသတင်းများ • သတင်း • လူပုဂၢဳိလ္မ်ား • တာဝန်ရှိသော • လုံခွုံမှု • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ • ယခုခေတ်စား • USA မှ Breaking News
ဒီဇင်ဘာလတွင် 5, 2021
နော်ဝေ၏ စည်းမျဉ်းများ အရ အဆိုပါရောဂါဖြစ်ပွားမှုသည် ခရီးသည်များနှင့် လေယာဉ်အမှုထမ်းများအားလုံးကို ခရီးမသွားမီ အနည်းဆုံး နှစ်ပတ်အလိုတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားရန် လိုအပ်သည်။
A နော်ဝေ Cruise Line New Orleans သို့ခရီးသည် 3,000 ကျော်လိုက်ပါလာသောသင်္ဘောသည်သင်္ဘောပေါ်တွင် COVID-19 ဖြစ်ပွားနေကြောင်းသတင်းပို့ခဲ့သည်။
သင်္ဘောပေါ်ရှိ ခရီးသည်များနှင့် အမှုထမ်းများ အားလုံးကို မတက်မီ ကာကွယ်ဆေး ထိုးရန် လိုအပ်သော်လည်း သင်္ဘောပေါ်ရှိ လူ ၁၀ ဦးတွင် COVID-10 ရောဂါပိုး တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း၊ Norwegian Breakaway အပျော်စီးလိုင်း။
အဆိုပါ Norwegian Breakaway နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် နယူးအော်ရီလန်းမြို့မှ ထွက်ခွာခဲ့ပြီး ယခုသီတင်းပတ်ကုန်တွင် ထိုမြို့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိရန် စီစဉ်ထားသည်။ ၎င်း၏လမ်းကြောင်းတွင် သင်္ဘောသည် Belize၊ Honduras နှင့် Mexico ရှိ ဆိပ်ကမ်းအများအပြားကို ဖုန်းခေါ်ဆိုခဲ့ကြောင်း Louisiana ကျန်းမာရေးဌာနမှ သိရသည်။
သင်္ဘောပေါ်တွင် ခရီးသည်နှင့် အမှုထမ်းပေါင်း ၃၂၀၀ ကျော် လိုက်ပါလာသည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။ Norwegian Breakaway. အပျော်စီးသင်္ဘောလိုင်းသည် "လူနာအသစ်များနှင့် ထိတွေ့မှုများကို ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိထားသောကြောင့် သင့်လျော်သော သီးခြားခွဲထွက်ခြင်းနှင့် သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပရိုတိုကောများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်" ဟု တာဝန်ရှိသူများက ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
New Orleans သို့ ဆိုက်ရောက်ချိန်တွင် ခရီးသည်နှင့် အမှုထမ်းတစ်ဦးစီသည် စမ်းသပ်မှုခံယူကြသည်။ COVID-19 ကူးစက်ခံထားရသူ မည်သူမဆို အပျော်စီးသင်္ဘောလိုင်းမှ ပံ့ပိုးပေးထားသည့် အိမ်၌ဖြစ်စေ တည်းခိုနေထိုင်မှုတွင်ဖြစ်စေ သီးသန့်ခွဲထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဖြစ်ပွားနေသော်လည်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ နော်ဝေ Cruise Lineခရီးသည်များနှင့် လေယာဉ်အမှုထမ်းများအားလုံးကို ခရီးမသွားမီ အနည်းဆုံး နှစ်ပတ်အလိုတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားရန် လိုအပ်သည့် စည်းမျဉ်းများ။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် စတင်ပြန့်နှံ့လာချိန် ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် အပျော်စီးသင်္ဘောများသည် ယမန်နှစ်တွင် ကျော်ကြားခဲ့ပြီး ခရီးသည်များ မကြာခဏ ဆင်းသက်ခွင့်ကို ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရသည်။ သင်္ဘောပေါ်တွင် သီးသန့်ခွဲထားရန် ဖိအားပေးခံရကာ အချို့မှာ ပင်လယ်ထဲတွင် သေဆုံးသွားကြပြီး အချို့မှာ နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းတို့၏ အခြေအနေ ဆိုးရွားလာသဖြင့် ဆေးရုံသို့ အမြန်ပို့ဆောင်ခဲ့ရသည်။ ယင်းကြောင့် အမေရိကန်အာဏာပိုင်များသည် အပျော်စီးသင်္ဘောများအားလုံးကို လပေါင်းများစွာ ရပ်ဆိုင်းထားရန် လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။
Norwegian Breakaway နော်ဝေ Cruise Line
8:2021 မှာဒီဇင်ဘာလ 06, 18
ပြီးတော့ ငါတို့က ငါတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ ကာကွယ်ဆေးကို မစောင့်နိုင်တော့ဘူး။ တကယ်လား !!
7:2021 မှာဒီဇင်ဘာလ 16, 28
၃၂၀၀ မှာ ၁၉ ယောက်က .19% ရှိတယ်။ "Major Outbreak" သည် စာဖတ်သူ၏ အာရုံစူးစိုက်မှုကို ရရှိနိုင်မည်ဟု ကျွန်တော်ထင်ပါသည်။ လူသားတွေဆီ အေးချမ်းသာယာမှုကို ဆောင်ကြဉ်းပေးပြီး ဒီကပ်ရောဂါကနေ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုတွေ မတိုးပွားလာစေဖို့ ကူညီကြပါစို့။
Buster Hyman ပါ says:
6:2021 မှာဒီဇင်ဘာလ 18, 09
Gee၊ ၎င်းသည် စမ်းသပ်ဆဲ၊ မျိုးဗီဇပြောင်းလဲမှု သွေးခဲရိုက်ချက်နှင့်တူသည်မှာ လူသားများကိုသတ်ရန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအစီအစဥ်၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်။
6:2021 မှာဒီဇင်ဘာလ 07, 28
ဟင့်အင်း၊ COVID ရဲ့ လိမ်ညာမှုတွေ ဆက်ရှိနေတယ်။ Alan Fine သည် ဇာတ်ကြောင်းကို တွန်းအားပေးရန် ဤနေရာတွင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်တွေက ရောဂါဖြစ်စေတာ မဟုတ်ဘူး၊ ဆင်းရဲတဲ့ ဂျူးဘာသာဝင်တွေလား။